"Dhibaatooyin Badan Baan Lasoo Kulmay, Ciyaaro Sidan Oo Kale Ah Ayaan Tabayey.... Ugu Dambayntiina..." - GOOL24.NET
“Dhibaatooyin Badan Baan Lasoo Kulmay, Ciyaaro Sidan Oo Kale Ah Ayaan Tabayey…. Ugu Dambayntiina…”
Xiddiga reer Brazil ee Philippe Coutinho ayaa qirtay inuu dhibaatooyin iyo waqtiyo adag kusoo qaatay kooxda uu amaahda kaga yimid ee Barcelona, waxaanu hoosta ka xariiqay inuu aad ugu xiisay horyaalka Premier League iyo kulankii quruxda badnaa ee uu xalay qaybta ka noqday.
29 jirka reer Brazil ayaa beddel kusoo galay daqiiqaddii 68aad kulankii ay kooxdiisa Aston Villa barbarraha 2-2 la gashay Manchester United. Waqtiga lasoo geliyey ayaa laba gool lagu lahaa kooxdiisa cusub, waxaana uu ka shaqeeyey goolka koowaad ee uu dhaliyey Ramsey kaddibna isaga ayaa ku daray midka labaad.
Aston Villa ayaa ka daba timid Manchester United oo laba gool uu u dhaliyey Bruno Fernandes, waxaana dhibicda ay heshay kooxda Steven Gerrard mahaddeeda iska lahaa COutinho oo bandhig heersare ah sameeyey.
Afar sannadood oo uu kasii maqnaa horyaalka Premier League oo uu ka tirsanaa Barcelona, waxa uu Coutinho qirtay inay u ahayd xilliyo adag iyo waqtiyo aan degganayn oo marba nooc ahaa.
Telefishanka Sky Sports ayuu la hadlay ciyaarta kaddib, waxaanu yidhi: “Waan tebay ciyaaraha noocan oo kale ah, waanan u xiisay horyaalka Premier League. Sidii aan horeba u sheegay, aad ayaan ugu faraxsanahay in aan halkan joogo oo aan la kulmo ciyaartoyda kooxdayda cusub.
“Waa bilow fiican. Waxa aanu dheelnay ciyaar fiican. Waxa aanu rumaysnayn in aanu guuleysan karayno illaa dhamaadkii laakiin ma aanaan guul-darraysan waananu soconaynaa.”
Philippe Coutinho ayaa la weydiiyey caqabadihii uu kula kulmay Camp Nou tan iyo markii uu £142 milyan oo Gini ugu wareegay January 2018, xilligaas oo uu ka tegay Liverpool, waxaanu ku jawaabay: “Waxa jiray waqtiyo badan oo aan dhibaatooday iyo kuwa aan sarreeyay, laakiin hadda waa laga soo gdubay.
“Halkan ayaan joogaa, yoolkayguna waa sidii aan kooxdan iyo ciyaartoyda aanu isku cusub nahay aan u caawin lahaa.”
Waxa kale oo uu Coutinho sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu la shaqeeyo Steven Gerrard oo ay hore ugu soo wada ciyaareen Liverpool.
Aston Villa ayaa heshiiska amaahda ah ee ay Coutinho kaga soo qaadatay Barcelona, waxa ugu jira qodob dhigaya inay £33 milyan oo Gini ku iibsan karto xagaaga, taas oo la rumaysan yahay inay hirgelin doonto haddii uu laacibkani sii wado bandhiggii uu xalay sameeyey oo kale.